अर्काको छोरो – MySansar
Posted on January 25, 2014 January 25, 2014 by mysansar
अरू कुमारी केटीहरू सपनामा आफ्नो राजकुमार खोज्छन् रे तर मैले त्यस्तो सपना कहिल्यै देखिनँ। जस्तो पर्छ त्यस्तै टर्छ भन्ने लाग्थ्यो। एउटा जिन्दगी हो भोगौँला भन्ने हिम्मत थियो तर अरूले सपनामा खोज्ने राजकुमार मैले विपनामा नै पाएँ। रोहणले मलाई दिएको माया म यहाँ वर्णन गर्न सक्तिन।
बेलैमा छोराछोरी हुर्काउने हो भने त्यसपछिको जवानी सुन्दर हुन्छ रे, हामी पनि त्यतापट्टी सोच्ने हो कि ? एक दिन रोहणले प्रस्ताव ल्याए। मैले स्वीकार गरेँ। हाम्रो त्यो सहमतिमा जन्मेको छोरो आज राम्रो स्कुलमा बोडर्स छ। गत असारदेखि दस वर्ष लागेको छ। त्यसपछि दोस्रो सन्तानका लागि हामीले सोच्तै सोचेनौँ।
एक दिन रोहण अन्यमनस्क हुँदै अफिसबाट आए र थचक्क सोफामा बसे। मैले आजसम्म उनलाई यस्तो थकित र गलित कहिल्यै देखेको थिइन। छेउमा गएँ निधार छामेा, सुमसुम्याएा र सोधेँ- के भयो मेरो राजा आज तिमीलाई ? उनले मेरो कम्मरमा हात बेरेर कुममा चिउँडो टेकाउँदै भने हेर न मलाई जस्तो अवसर अरू कसैलाई आए थाप्लो ठोकी ठोकी हामफाल्दै जाने थिए। मेरो अफिसलाई अमेरिका जाने एउटा कोटा आएको छ। मेरो बाहेक अरूको योग्यता पुग्दैन। पढ्न पनि पाइन्छ, तलब पनि डलरको भाउमा। हाकिमले जाऊ भन्छ तर तिमीलाई छोडेर मलाई जान पटक्कै मन छैन।
म छाँगाबाट खसे जत्तिकै भएा। रोहण नभएको दिन मैले सपनामा पनि देखेकी छैन। ऊ नभएको रातको कल्पना पनि गरेको छैन। म चिच्याउँदै भन्न चाहन्थेँ, तिमी मलाई एक्लै छोडेर जाने कुरै नगर। फेरि विचार गरें “भाग्यले दिने कर्मले ठेल्ने” भन्छन्। मैले त्यसरी अड्डी लिँदा हाम्रो ठूलै अवसर पो गुम्ने हो कि ? म गहभरि आँसु जमाएर चुप लागेा। रोहणको मुखबाट पनि एक वाक्य फुटेन। हामी च्याप्प अँगालोमा कसिएर सुत्यौँ र अनिदै आँखा लिएर बिहान उठ्यौँ।
एक कान दुई कान मैदान भयो रोहणलाई अमेरिका जाने अवसर आएको कुरा। रोहण जान मन गर्दैन रे भन्ने हल्ला पनि खडेरीको भष्मे सल्किए जस्तो सल्किसकेछ। आफन्तहरू, नाता गोताहरू घरमा भेला भएर सम्झाउन थाले बाबै समय आउँछ पर्खिंदै। अब त छोरो पनि स्कुल जाने भैसक्यो। लाजवन्ती छोरो पढाउँछिन् घर थामेर बस्छिन्, केही वर्षको कुरा हो। त्यसपछि तिमीहरूलाई सुखै सुख। रोहणको बारेमा गाउँभरि टीका टिप्पणी सुरु भए, स्वास्नी छोड्न नसक्ने लाछी। कसै कसैले त सुँगुरलाई स्वर्ग जान्छस् भनेजस्तै हो रोहणलाई अमेरिका जा भन्नुसम्म भने। उता अफिसमा, हाम्रो कार्यालयको प्रतिष्ठाको कुरा हो तिमीले नाइँ भन्न मिल्दैन भनेर हाकिमले दबाब दिइरहेका थिए। यी चौतर्फी राप र तापबाट म पनि गलिसकेकी थिएँ। अमेरिका जाऊ रोहण म तिमी फिर्ने बाटो कुरेर यो घर रूँगिरहन्छु। मैले यो भन्दा बढी बोल्न सकिन र घोप्टो परेर रुन थालेँ। रोहणले पनि मेरो पिठ्यूामा आँसु खसाउँदै रात बिताए। हाम्रो बिछोड निश्चित भयो।
तिमीलाई दुःख हुन्छ, छोरालाई बोडर्स नै राखिदिनु भने रोहणले। म झन् एक्लै हुन्न र ? मैले प्रश्न गरें। भोलिपल्ट गाउँ गएर एउटा केटो लिएर आएँ। गोरो, सुकिलो, सलक्क हात खुट्टा भएको दुब्लो त्यो केटो मेरो छोरो भन्दा दुई वर्ष जेठो रहेछ। यसका बाबु अपाङ छन्। आमाले अर्कै घरजम गरिछन्। यसले पेटभरि खान पाएको छैन, पुस्तक च्यापेर स्कुल जान पाएको छैन। आजै स्कुल भर्ना गरिदिन्छु। बिहान बेलुका तिमीलाई काम सघाउँछ, बोल्ने साथी हुन्छ भने। मलाई पनि जायज नै लाग्यो। नुहाइदिएँ, सफा कपडा लगाइदिएँ। ऊ झन् सुकुमार देखियो।
कुन्दन चुप लाग्यो। लाग्छ पनि भनेन लाग्दैन पनि भनेन। आमाले अपाङ बाबु र आफूलाई छोडेर पोइल गएको विषय उसका लागि पीडादायक छ भन्ने सोचें। त्यसपछि मैले उसकी आमाका विषयमा प्रसङ्ग नै कोट्याइनँ।
भोलि रोहणको फ्लाइट छ। हिथ्रोमा चार घन्टाको ट्रान्जिट छ भन्दै कुरा गर्छन् बिदाइका लागि आएका रोहणका साथीभाइ। तिनीहरूका गफसँग मलाई कुनै सरोकार छैन। भोलिदेखि मेरो अङ्गालोमा रोहण हुने छैन। एक्ली, नितान्त एक्ली मलाई कालो रातले सर्लक्कै निल्नेछ। रोहण फिरेर आउँदा यो घरमा म हैन मेरो आत्माले पर्खिरहेको हुन्छ होला उसलाई। डरलाग्दा कल्पनाहरूले म कहालिन पुगेछु। सुटकेसमा सामान कोच्दै गरेका रोहण विद्युत्को गतिमा मलाई समाउन आइपुगे।
लाजवन्ती ⁄ बिर्खबहादुर अरबमा छ, गुणराज ज्यान जोखिममा पारेर इराक गएको छ, लाक्पा र धनकेशर बेलायत र अमेरिकामा छन्। तिनीहरूका पनि त मस्त जवानी छचल्किएका स्वास्नीहरू घरमा छन्। तिमीले देखिरहेकी छ्यौ। परदेश यात्राले ज्ञान बढ्छ, सीप बढ्छ, हिम्मत बढ्छ। तिमी अधैर्य बन्नु हुँदैन, म समयमा नै फिर्नेछु। मेरो आधा मनले भन्दैछ- रोहण पुरुष हो, पुरुष चाँडै रङ फेर्न सक्छ छेपारोले जस्तो तर पनि उसको कुराले मलाई केही ढाडस दियो। आँसु पुछें र बिदाइको हात उठाएँ। आन्टीको राम्रो हेरविचार गर्नु है, रोहणले कुन्दनतिर फर्केर भने अनि दैलाको ठेलामा भरिएको कलशको पानीले शिरमा शेचन गर्दै अघि बढे। जति टाढासम्म पुर्‍यायो त्यति ढिलो घर फिर्छन् रे भन्छन्, त्यसैले दैलाको ठेलासम्म मात्र पुर्‍याएर मैले रोहणलाई बिदा गरें।
आज रोहणसँग अलग भएर सुतेको पहिलो रात, थरिथरिका भय र आशङ्काले थिचेर म मर्माहत भै रहेकी छु। यतिखेर कहाँ पुगे होलान् ? के खाए होलान् ? कहाँ सुते होलान् ? उसको अवस्था मेरो जस्तै होला कि ? यस्ता धेरै प्रश्नहरूमा जेलिादै छु। म एक-एक गरेर केलाउँदै छु, जुन दिन म अन्मिएर रोहणसँग आएा त्यस दिनदेखि हाम्रो मन पनि एकाकार थियो र भौतिक शरीर पनि एकाकार थियो। यस घरमा भित्रिएपछिको पहिलो मासिक धर्मका दिन पलङमुनि ओछ्यान लगाएर सुत्ने तरखरमा थिएँ तर उनले ती लुगा उठाएर कुनामा राख्तै भने “छुनै हुँदैन भन्ने वैज्ञानिक मान्यता मैले कतै भेटेको छैन, त्यसैले हामी एकै ठाउँ सुत्छौं र जिन्दगीभर एकै ठाउँ सुत्ने छौं। ” त्यस रात म निक्कै डराएकी थिएँ। सबैभन्दा धेरै डर मलाई पापको थियो। यस कुरामा मेरी आमा निक्कै अनुदार हुनुहुन्थ्यो र मैले पनि त्यही बुझेकी थिएँ। म माइत जाँदा पनि सँगै जान्थ्यौँ, सँगै बस्थ्यौं र सँगै फिथ्र्यौं, तर मलाई उनको सामीप्यताको बोझ कहिल्यैा भएन, झर्को कहिल्यै लागेन। बरु कुनै न कुनै भागमा अतृप्ति बाँकी नै भए जस्तो लाग्थ्यो। म सधैा उनको तातो सास ठोक्किने गरी नजिकिएकी हुन्थें।
जीवनभरि सँगै सुत्ने उद्घोष गर्ने रोहण आज मेरो साथमा छैन। यो पलङ पनि उराठलाग्दो र कहालीलाग्दो भएको छ। अलिकति आँखा तानेर हेरें एउटा कुनामा सानो ओछ्यान लगाएर कुन्दन मस्तसँग बाल निद्रामा छ। उसलाई बोलाउन मन लाग्यो। “कुसमयमा कसैको निद्रा बिथोल्नु हुँदैन, पाप लाग्छ”, आमाको भनाइ सम्झेा। तर नबोलाई सकिन विस्तारै बोलाएा “कुन्दन” सुनेन, फेरि बोलाएँ, धेरैपल्ट बोलाएपछि ऊ चट्पटायो र हस्याङ फस्याङ् गर्दै उठ्यो।
तँ त कस्तोसँग निदाइस्, हेर न बाबु मलाई त एक झप्को पनि निद्रा आएन। निद्रामा उठाएर अन्याय गरेबापत उसलाई मैले मायालु वचन दिएँ। कुन्दन पलङको छेउमा आयो, भुइँमा घुँडा टेक्यो र कुहिनाले पलङ टेक्तै सोध्यो- सञ्चो भएन कि ?
मनको विसञ्चो मात्र हो अरू केही होइन। त्यो अबोधले मेरो आशय कसरी बुझ्थ्यो र त्यै पनि भन्यो, केही औषधि खानुपर्छ कि ?
मैले मनमनै भनें, मेरो मन विसञ्चो भएको औषधि कहाँ पाइन्छ भन्ने तँलाई के थाहा र !
“सुत्ने बेलामा तैाले हातगोडा धोइस् ?”
“राम्रोसँग धोइस् के त ?”
“राम्रोसँग धोएँ, साबुन लगाएर, मुख पनि धोएँ। ”
“लुगामा जुम्रा छ कि छैन ?”
“तपाईंले दिनुभएको नयाँ लुगा त हो नि केही पनि छैन। मेरो पुरानो लुगामा पनि जुम्रा चाहिँ थिएन। ”
त्यसो भा आइज मसँगै सुत ”
कुन्दनले आश्चर्यजनक रूपमा आँखा फैलायो र भन्यो “आन्टीसँगै ?”
“अँ अँ आइज। एक्लै त्यो कुनामा के सुत्छस्। ” मैले एउटा सानो सुत्ने आधार पाएँ। कतिखेर निदाएँ पत्तै भएन।
कुन्दन घरको काममा सिपालु भइसकेको थियो। अह्राउनु नपर्ने, अझ भन्ने हो भने ऊ भएको बेला मैले केही गर्नै नपर्ने। उसको पढाइ पनि दिनदिनै राम्रो हुँदै गएको थियो।
स्कुलमा तीन दिनको छुट्टी थियो। कुन्दनलाई लिएर म छोरालाई लिन स्कुलमा गएँ। कुन्दन तँ भन्दा दुई वर्ष जेठो छ, तेरो दाजुजस्तै हो भनेर उसलाई चिनाएँ। केटाकेटीको जात न हो चाँडै घुलमिल भए। छोरो घरमा बसुन्जेल मैले कुन्दनलाई घरको काम लगाइँन। बोर्डिङ स्कुलको पराधीनताबाट मुक्ति पाएको समयमा उसले खेल्न पाउनु पर्छ, उफ्रिन र दौडिन पाउनु पर्छ भन्ने लाग्यो। कुन्दन र छोराको खेल्ने जोडी खुबै मिल्यो। म माझमा सुतेर यी दुवैलाई आफूसँगै दुईपट्टी सुताएँ। राति अबेरसम्म तिनीहरू पलङमै खेलिरहन्थे, चलिरहन्थे, बोर्डिङ र स्कुलका गफ गरिरहन्थे। म दुवैलाई एउटा एउटा अँगालोमा बेरेर वक्षस्थलमा टाँसी-टाँसी निदाउँथे। त्यो तीन दिन रोहणको सम्झनाले अलिक कम थिचेको अनुभूति भयो।
मेरो छोराले भनेको सुनेर कुन्दनले पनि एकपल्ट मलाई “मुमा” भन्यो। म अलमल्ल परेँ। कुन्दन मेरो छोरो जस्तै मात्र हो तर मेरो छोरो हैन। ऊ कसैको छोरो हो। हुन त रोहण पनि त कसैको छोरो हो नि। म उसको मायामा पागल हुँदैछु। यो कुन्दन, कसैको छोरो, यसको मायामा पनि म लठ्ठ हुँदै गएकी छु। अर्काका छोराहरूको माया किन लाग्छ यसरी, मैले बुझ्न सकेकी छैन। मैले कुन्दनलाई अलिक कडा बोलीमा भने, कुन्दन तैँले मलाई आन्टी भन्नु, आन्टी मात्र भन्नु। ऊ जिल्ल पर्‍यो। मैले उसलाई किन त्यसो भनें मलाई नै थाहा छैन। मेरो छोरालाई मैले ममी भन्न नसिकाएर मुमा भन्न सिकाएँ। अङ्ग्रेजीका यी नाता बुझाउने शब्दहरूसँग मलाई विश्वास छैन। आफ्नोपन छैन तर कुन्दनसँग म त्यही रूखो र सारहीन सम्बोधन किन मागिरहेकी छु, म आफैंलाई थाहा छैन।
मेरो छोराको तीन दिन घर बसाइपछि कुन्दनलाई पनि मेरो शरीरमा लेपासिएर सुत्ने बानी परिसकेको थियो। कहिले अङ्गालो हाल्थ्यो कहिले खुट्टा बोकाउँथ्यो। म पनि उसलाई त्यसै गर्थेा। अङ्गालामा बेरेर म्वाइँ खान्थें, गाला सुम्सुम्याउँथे। उसका चिल्ला, राता र पुक्क परेका गालामा स्कुलका मिसहरूले टोकेको कुरा सुनाएको थियो उसले मलाई। तेरा मिसहरूले खै कसरी टोकिदिए रे भन्दै म पनि उसको गाला टोकिदिन्थे। म उसलाई तेल लगाएर जीउ मालिस गरिदिन्थें। उसलाई उसकी आमाले दिन नसकेको माया दिएकी हूँ भनेर मेरो मनमा उठ्ने भय र सम्भावनाहरूलाई पर-पर हुत्याउँथे र पनि मैले उसकी आमा बन्न कहिल्यै स्वीकार गरिन। कुन्दनले पनि मेरो कम सेवा गरेको छैन। जीउभरि तेल दलेर मालिस गरिदिएको छ। अस्त-व्यस्त कपडाहरूको पर्वाह नगरी नाङ्गो ढाडमा चिलाइ मर्नेगरी कन्याइदिएको छ। कतिपल्ट मेरो उन्मुक्त ढाड थिच्दा-थिच्दै त्यही घोप्टो परेर निदाएको छ। कहिलेकाहीं विचार गर्छु यो कुन्दन पनि नभएको भए त म पागल नै भइ सक्थें होला।
रोहण गएको आज दुई वर्ष एघार महिना भयो। अब एक महिनामा म रोहणको बलियो र तातो अङ्गालोमा कसिएर अमेरिकाका मीठा-मीठा कथाहरू सुन्नेछु। शरीर फूल जस्तै हलुङ्गो भएर आयो। भोलि बिहानै उठेर म कुन्दनलाई अङ्कल आउने समय भएको सुनाउने छु र “अब तेरा मसँग सुत्ने दिन सकिए है बाबै”, भन्नेछु भन्दै मीठा कल्पनाहरूले सजिएर निदाएँ। उज्यालो भयो म अरू दिनको भन्दा छिटो उठेँ अर्थात् मेरा मनका खुसीका तरङ्गहरूले मलाई सुतिरहन दिएनन्। फोनको घन्टी बज्यो। फोनको रिसिभरलाई झम्टिएँ। रोहण कति तारिखको टिकट छ ? रोहण मलाई पहिले भनन कति तारिखको टिकट लियौं ? म तारिख सुन्न व्यग्र थिएँ तर रोहणले तारिख बताएन, उसले भन्यो “माफ गर लाजवन्ती म अरू दुई वर्ष आउन नपाउने भएँ। ”
मैले त्यो अमेरिका भन्ने ठाउँलाई धारे हात पारेर सरापें। रोहणको अफिस र त्यो पापी हाकिमलाई सरापें। आजसम्म कसैले नदुखाएको मेरो चित्तलाई चिरा-चिरा पारेर नून खोर्सानी छर्किदियो रोहणले। आज मलाई उसँग पनि कहिल्यै नउठेको रिस उठेर आयो। त्यहीं बस्नु, त्यहीं घरजम गर्नु, त्यहीं एउटी कुइरेनी ल्याउँनु, अब लाजवन्ती मरी भनिदिनु जस्तो लागेको थियो तर फोनको लाइन काटिइसकेको थियो।
कुन्दन स्कुल गएपछि म रामेश्वरीको घर गएँ। रामेश्वरी मसँग विचार मिल्ने साथी हो। उसको पनि लोग्ने कतारमा छ। रामेश्वरीको घरमा लोग्ने परदेश भएका आइमाईहरू भेला भएर छिल्लिंदै गफ गरिरहेका छन्। लौ लाजवन्ती पनि थपिई भन्दै सबै हाँसे। रामप्यारीको लोग्ने हिजै मात्र कोरियाबाट आएको रहेछ। सबै मिलेर रामप्यारीलाई उल्ली-बिल्ली पारिरहेका छन्। कोरकोराउँदै बसेकी थिइस् नि थाहा पाइस् भने। रामप्यारीको अनुहार रगत चुहिएला जस्तो थियो। रामप्यारीबाट आइमाईहरूको ध्यान हटाउने उद्देश्यले मैले भनें- परदेशबाट बूढो आउँदा त्यस्तो के हुन्छ र ? तिम्रो पनि बूढा आएको दिन थाहा हुन्छ। सेर्पिनी ठूलीले प्वाक्कै भनी, सबै गललल्ल हाँसे। मैले पनि हाँसी सघाएँ। तर मलाई मात्र थाहा छ मेरो बूढोको अवधि दुई वर्ष थपिएको छ।
काम सकेर कुन्दन पनि हात पुछ्दै आयो, सिरकभित्र छिर्‍यो र दाहिने हात मेरो छात्तीको वारपार तेस्र्याएर एकछिनमा भुसुक्क निदायो। मेरो चौडा छात्ती नाघेर उसको हातको पञ्जा लत्रक्क लत्रिएको थियो। कुन्दनको हात हो र यति लामो बालकको हात कसरी यति लामो हुन्छ ? को आएर मसँग सुत्यो ? मेरो आङ जिरिङ भएर आयो। निधार छामे, गाला छामें, छात्ति छामेँ त्यो कुन्दन नै थियो। कुन्दन आफ्नो टाउकोलाई मेरो टाउकाको समानान्तर राखेर निदाएको थियो। आफ्ना खुट्टाले उसका खुट्टा छामेँ, अर्थात् मैले उसको उचाइ नापें। ऊ मभन्दा पनि अग्लो भइसकेको रहेछ। मलाई पत्यारै लागेन, यो केटो कति चाँडो यसरी हलक्कै बढेछ। छ्या यो त सिङ्गो लोग्ने मान्छे पो भइसकेछ, रोहण जस्तै लोग्ने मान्छे। मेरो शरीर ढक्क फुलेर आयो। म अलिकति लजाएँ, अलिकति डराएँ तर मेरो मन रोमाञ्चित भइरहेको थियो। मभित्र सल्किँदै निभ्दै गरेका आगाका लप्काहरू कुन्दनलाई अनुभूति हुने कुरै भएन, ऊ गहिरो निद्रामा थियो।
एकछिनपछि म कुन्दनतिरै कोल्टे फिरेँ, उसलाई लपक्कै अङ्गालो हालेँ। देब्रे खुट्टा उसको शरीरमाथि राखेँ। यतिले पनि मेरो मन अघाएको थिएन। उसलाई ब्यूँझाएर चल्न, जिस्किन र खेल्न मन लागिरहेको थियो तर उसलाई ब्यूझाउँने हिम्मत गर्न सकिन। अझ म मनमनै कामना गरिरहेकी थिएँ, यो अझ गहिरो निदाओस्। मैले उसको छात्ती नापेँ। उसको छात्ती पनि कहिले-कहिले चौडा भइसकेको रहेछ। मैले उसको कपाल मुसारे पिठ्यूँ सुम्सुम्याएँ, नितम्ब स्पर्श गरेँ र कम्मरमा हात राखेँ। मलाई झल्यास्स सम्झना भयो, सुरूका दिनमा रोहणको कम्मर पनि त यस्तै पातलो थियो नि। रोहणको सम्झनाले मलाई एकछिन व्याकुल बनायो तर त्यो व्याकुलता धेरैबेर टिक्न सकेन। फेरि मेरो मन कुन्दनको शरीरमाथि नै पोखियो। मलाई अहिले त्यो दिनको कुरा भन्न असजिलो लागिरहेको छ तर पनि म सत्य भनिरहेकी छु। मेरो मन थामिएन, त्यो दिन मेरा हातहरू कुन्दनको नितान्त गोप्य र निजी क्षेत्रहरूमा पनि अतिक्रमण गर्न पुगे र संवेदनशील कित्तामा सल्बलाए। त्यसपछि म कतिखेर निदाएँ, पत्तो भएन। बिहान उठ्ता पलङको डिलमा खुट्टा तल झारेर कुन्दन घोसे मुन्टो लगाएर बसेको थियो। मैले सङ्कोच मान्दै सोधे- कुन्दन के भयो ? उसले घोसे मुन्टो लगाएरै भन्यो “छ्या आन्टी पनि। ”
रोहण गएको साढे तीन वर्ष भयो, अब डेढ वर्षमा ऊ घर आउँछ तर त्यो कुराले मलाई कुनै सान्त्वना दिन सकिरहेको छैन। यी बितेका वर्ष र बित्ने वर्ष मेरो अमूल्य जीवनबाट त्यत्तिकै तुहेर जाँदैछन्। पाँच वर्ष भनेको समय कम हैन। मेरा कति इच्छाहरू झरेर गए, कति आकाङ्क्षाहरू ओइलाएर झरे, मेरा शारीरिक आवश्यकताहरू त्यत्तिकै टाक्सिए। के त्यो पाँच वर्ष मलाई कसैले फिराइदिन सक्छ ? समयमा नखाएको फल कुहेर जान्छ। मेरो ओइलाएको जवानी र चाउरी परेको शरीरमा झुत्ती खेलेर रोहणले त्यस बेला के पाउँछ ? उमेर, जवानी र चाहनाहरू साँचेर साँचिने कुरा हैनन्। मलाई रोहणप्रति पनि शङ्का जागेर आयो। के यतिका वर्ष मलाई नै सम्झेर रात काटिरहेको होला त ? मेरै लागि बलवीर्य सञ्चय गरेर बसेको होला त ? अहँ विश्वास गर्नु हुँदैन, ऊ लोग्ने मान्छे हो, ऊ स्वतन्त्र यौन इच्छा पूरा गर्न पाउने भूमिमा छ र स्वयं पनि स्वतन्त्र छ।
आज मैले दाहिने पाखुरा कुन्दनको गर्धन मुनिबाट छिराएँ र आकाशतिर दृष्टि लगाएर सुतेँ। कुन्दनको एउटा हात र खुट्टाको भार मलाई महसुस भइरहेको छ तर मलाई त्यो भारसँग कुनै चाख थिएन। मेरा स्मृतिहरू रोहणसँगको पहिलो रातमा हुत्तिएर पुगेका थिए। म डरले लगलग कामिरहेकी थिएँ। रोहणका नरम स्पर्शहरूले मेरो सिङ्गो शरीरलाई कुत्कुत्याइरहेको थियो र समर्पणका लागि उक्साइरहेको थियो। रोहणले मलाई यसरी समातेको थियो कि जसरी शेरले आफ्नो सिकारलाई समातेको हुन्छ। म झल्याँस्स यथार्थमा फिर्छु। एउटा वलिष्ठ वस्तुले मलाई थिचिरहेको छ। मैले उसलाई ठेल्न खोजिनँ, पन्छाउन खोजिनँ। बरु त्यो आगाको डल्लो जस्तो वस्तुलाई च्याप्प समाते दुई हातले तर त्यो तत्कालै चिसो भो बरफ जस्तो र पग्लिन थाल्यो। मैले समाउँदा समाउँदै शङ्खे कीरामा नून परेजस्तो पग्लिएर पलङमा पोखिन पुग्यो। त्यो अधुरो यात्राले म विचलित हुन पुगेँ। रीस र ग्लानि एकैचोटि मेरो शिरमा चढ्यो। मैले उसलाई कुटें, चिथोरेँ, टोकेँ र जगल्ट्याएँ। ऊ निर्जीव मुढो जस्तो लडिरहृयो, सही रहृयो। म फेरि सामान्य अवस्थामा आएँ, यस बेला मलाई खुसी लागिरहेको थियो, मैले मनमनै भने “कुन्दन पनि अब योग्य भएछ। ” फेरि मेरा ओठ फुसफुसाए, “रोहणले आज नराम्रो सपना देख्यो होला। ” (मधुपर्क, २०६६ जेठमा प्रकाशित)
12 thoughts on “अर्काको छोरो”
यस्तो वैयात ,काम गर्न आको केटोलाई छोरा भनेर च्यापेर सुताको कसैले पत्याउने कुरा भयो ?बरु बिस्तारै हेर्दा हेर्दै माया बस्यो भन्न मिल्छ ! कथा पूर्ण छैन!
लेखन शैली राम्रो तर लेखकको विचार नराम्रो/ १००% काल्पनिक र हुननसक्ने कुरा /
यस्तो कथाले सामाजिक बिकृती ल्याउँछ / लेखक्ज्यु, सोंच बदल्नुस वा लेख्न छाड्नुस, तपाईं नभए पनि मर्दैन नेपालि साहित्य /
आफ्नो छोरा लाइ बोडर्स मा राखेर अर्को काम गर्ने बच्चा घरमा राख्नु अनि … काम गर्ने केटो लाइ संगै सुताउनु अलि नपच्ने घटना भएन र !…जे होस् शैली राम्रो छ तर घटना पत्याउन नसकिने छ …
बधाई छ माइसंसार लाई एस्तो स्तरिय कथा प्रकाशित गरेकोमा !!!! अब नेपाली हरु पनि यूरोपिय र अमेरिकी मापदण्ड मा पुगेछन , नेपालको विकास भएन भन्ने हरुलाई “दह्रो झापड”
कुनै कुनै कुरामा त नेपाल पनि बिकसित भैसकेछ !!!!
के को विकास अनि युरोप अमेरिका को दाजो मा नि !!!युरोप मा त छोरो समान १४ बर्से बालक संग को सम्बन्ध लै कानुनी सजाय …पेडोफिल को मुद्दा हालिन्छ
एक्लो एक्लै लामो समए बाहिर बिताउने महिला पुरुष दुबैको यतार्थ पिडा हो यो …
पाँच वर्ष भनेको समय कम हैन। मेरा कति इच्छाहरू झरेर गए, कति आकाङ्क्षाहरू ओइलाएर झरे, मेरा शारीरिक आवश्यकताहरू त्यत्तिकै टाक्सिए। के त्यो पाँच वर्ष मलाई कसैले फिराइदिन सक्छ ? समयमा नखाएको फल कुहेर जान्छ। मेरो ओइलाएको जवानी र चाउरी परेको शरीरमा झुत्ती खेलेर रोहणले त्यस बेला के पाउँछ ? उमेर, जवानी र चाहनाहरू साँचेर साँचिने कुरा हैनन्। बडो मार्मिक छ !
पुरानो कथा भएपनि दोहोर्याएर पढ्दा मजा लाग्ने । समाज परिवर्तनशिल छ र साहित्यले चारदिवार भित्रको घटनालाई निर्लज्ज मिठासपूर्ण रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ, समयको बहाव, १२+३ =१४ बर्षको कुन्दन, छोराको होस्टेल बसाई, रोहणको २बर्ष थप समयावधि जस्ता साना कुराहरुले कथा उत्कृष्ट बनाएको छ ।
I was surprised that this ‘story’ was published on मधुपर्क !!
कथा को लेखन सैली राम्रै छ तर नेपाली संस्कृति ले धन्न नसक्ने बिषय बस्तु.
कथा पढ्न मज्जा आयो, परिपक्क लेखाई र आकर्सक सैलीमा धारा प्रबाह भएकोले कथा रोचक छ . मेरो फरक सोच हो वा साचै हो, यहाँ बाल यौन सोषण भएन र? १२ बर्से केटोको माया लाग्यो यार. येदि यो कथा साचो हुन्थियो र त्यो १२ बर्से केटोबाट बर्णन हुन्थियो भने यो कथा कस्तो बन्थियो होला 😀
कथाकी लाजवन्ति मात्र हो कि सबै बिबाहित महिला हरुको सोच तेस्तै हो / लोग्ने भनेको मात्र अंगालोमा बाधिन को लागि होइन / उ त परिस्थिति अनुसार आफ्नो तथा घर परिवारको उज्जल भविष्यको लागि आफ्नो इच्छा बिपरित भए पनि केहि समयको लागि घर परिवार बाट टाढा रहनु पर्ने हुन्छ / लोग्ने घर बाट टाढा हुदा नै आफनो घर परिवारका सदस्य हरु को माया लाइ बिर्सियो भनेर शंका गर्नु र नजिक हुदा माया गर्यो भन्नु मात्र भ्रम हो तेसैले रोहण जस्ता लोग्नेलाइ लज्वन्ति जस्ती श्रीमतीले अन्यथा नसोच्ने र कुन्दन संग को जस्तो ब्यबहर नगर्ने हो भने परिवार को सुख नै तेही छ /
खिन्न बनायो यो कथा ले.. लेखन सैली सबै राम्रो तर कथा को अन्त अत्ति नै अपच्य लाग्यो मलाई त.. आमा छोरा को जस्तो सबै भन्दा पबित्र नाता को यस्तो मोड कत्ति पनि पचेन भो.
सारै राम्रो कथा! Poshan Pandey स्तर को!!